प्रदेशलाई अघि बढाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको : उपप्रधानमन्त्री यादव - प्रदेशलाई अघि बढाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको : उपप्रधानमन्त्री यादव
प्रदेशलाई अघि बढाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको : उपप्रधानमन्त्री यादव
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १८ आश्विन, 04:20:12 PM
जनकपुरधाम । उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रदेशलाई अघि बढाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको रहेको बताएका छन् ।
लोक सेवा आयोग, करार सेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेशको विकास कामलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा उनले राखेका हुन् ।
जनकपुर अंचल अस्पतालको नवनिर्मित बहिरंग विभागको समुद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नको लागि निर्देशन दिएका हुन् ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री यादवले प्रदेशलाई श्रोतसाधन, प्रशासन सम्पन्न बनाउनको लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताए । उनले जनकपुर अंचल अस्पतालको नाम फेरेर प्रादेशिक बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अनियमित तरिकाले काम गर्ने जोकोहीलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको मातहत आइसकेकोले त्यसमा रहेको समस्या बुझेर समाधान खोज्दै अघि बढने उनले बताए । अनियमित तरिकाले भएको कर्मचारी भर्ना खारेज गरिने बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले गर्छ, उनले भने–गुणस्तरीय सेवाको लागि आवश्यक सबै कामहरु गर्छौ ।
सो अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको करिब चार करोड बराबरको उपकरण जनकपुर अंचल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
समुद्घाटन समारोहमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, परिवार कल्याण महाशाखाका महानिर्देशक डा. आरपी विच्छा लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
२०७५, १८ आश्विन, 04:20:12 PM
सरकार केसीसँग गरेको सम्झौतामा इमान्दारी बन्नु पर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
‘डाक्टर साब’को सरकारलाई कटाक्ष ! सामाजिक संजालमा बन्यो भाइरल